Trump oo ka hadlay Hawlgalka Milliteriga Mareykanka ka wadaan Somalia iyo dalal kale – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalkaasi ayaa soo badnhigay Qoraal uu Madaxweyne Donald Trump u kala diray Afhayeenadda Aqalka Wakiilladda Maraykanka iyo Sii-hayaha xilliga ee Madaxa Aqalka Senedka ee dalkaasi oo uu kaga hadlay Hawlgalladda ay Ciiddanka Maraykanka ka wadaan dalal ka tirsan Caalamka.
Waxa uu soo hadal-qaaday Qaraarka Awoodaha Dagaalka ee Sharciga 93 ilaa 148) ee qeybta ka ah dadaalkiisa ku aadan inuu Kongareeska ku wargeliyo arrimaha Daad-gureynta Ciiddamada Maraykanka ee loo hubeeyey dagaalka.
Waxa uu sheegay tan iyo bishii October 7-dii ee sannadkii 2001-kii inay Ciiddanka hubeysan ee Maraykanka oo ay ku jiraan Ciiddanka Khaaska ee Hawlgalladda ay fuliyeen Hawlgalo lagula dagaalamayo Kooxaha Alqaacida, Daalibaan iyo kuwa taabacsan, waa sida uu hadalka u dhigay.
Warbixinta qoraalka ee Madaxweyne Trump u diray Madaxda Sare ee Kongareeska dalkaasi waxa kale oo uu ku muujiyey in Hawlgalladaasi lala beegsaday Ururka Daacish ee ka dagaalamay Iraq iyo Syria oo uu xusay in horey loo dhihi jirey Al-waacidada ku sugan gudaha Iraq.
Waxa kale oo uu xusay in Ciiddamadda Maraykanka ee loo daad-gureeyey dalalka kale ay lama hurana u tahay si looga hortago khatarta cabsida ee lagu hayo Maraykanka.
Qoraalka Trump waxa uu ku soo hadal qaaday Tiradda ciiddanka Maraykanka iyo Hawlgalladda ay ka wadaan dalal ay ka mid yihiin Somalia, Jabuuti, Masar, Turkiga, Kenya, Syria, Iraq, Yemen, Nigeria, Chad, Cameroon, Urdun, Lubnaan iyo Afganistan.
Qoraalka Trump waxa uu si gaar ah kaga hadlay Ciiddanka Maraykanka ee jooga Mandiqadda Geeska Afrika, wuxuuna xusay inay Somalia ka wadaan Hawlgal ay kula dagaalamayaan Daacish-ta Somalia iyo Alshabaab oo xiriir la leh Ururka Alqaacida, waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxa kale oo uu xusay inay Ciiddanka Maraykanka qaadeen tiro weeraro dhanka cirka oo ka dhan ah Al-shabaab iyo Daacish-ta ku sugan Somalia, isla markaana ay Ciiddankiisa La-talin, taageero siiyaan Ciiddanka Gobalka oo ay ku jiraan kuwa Hawlgalka AMISOM iyo Ciiddanka Qaranka Somalia, isla markaana ay kala qeyb galaan Hawlgalladda La-dagaalanka Alshabaab.
Donald Trump waxa kale oo uu ku xusay qoraalkisia in Ciiddamo Maraykan oo dheeraad ah loo daad-gureeyey dalka Kenya, si ay gacan uga geystaan Hawlgalladda ka socda Bariga Afrika.
Waxa kale oo uu soo hadal-qaaday Ciiddanka ka jooga dalka Jabuuti, isagoo xusay inay wada-shaqeyn la leeyihiin Dowladda Jabuuti oo u fasaxday Maraykanka inay xuduudahooda u adeegsan karaan saldhigga Ciiddanka Maraykanka ku leeyihiin dalkaasi.
Waxa uu hoosta ka xariiqay inay Ciiddanka Maraykanka ee jooga Jabuuti ka qeyb galaan Hwalgalladda La-dagaalanka Al-shabaab iyo Burcad-baddeeda ku sugan Xeebaha ku hareeraysan Geeska Afrika iyo Gacan-biyoodka Carbeed.
Madaxweynaha Maraykanka waxa kale oo uu xusay in Ciiddankooda jooga Jabuuti loogu talagalay haddii loo baahdo inay taageero Gurmad ah siiyaan Safaaradaha Maraykanka ee Gobalka.